Shiinaha Geli soo-saaraha wax-soo-saarka iyo alaab-qeybiye | Meesha
Gali wax taaj oo kale ahwaa habka balaastigga lagu durayo ee balaastigga ah halkaas oo balaastik lagu durayo dalool iyo hareeraha gabal ama qaybo la galiyay isla godka wax yar ka hor wax taaj oo kale. Wax soo saarka ka soo baxa geeddi-socodkani waa hal xabbo oo leh waxyaabo la gelinayo ama la gelinayo oo ay ku duuban tahay caaggu
Mashiinka gelinta wuxuu balaariyaa awooda caaga wuxuuna kaa caawin karaa yareynta qiimaha badeecada iyadoo la xadidayo qadarka biraha qaaliga ah ee looga baahan yahay soo saarida alaabada. Gelinta waxaa laga samayn karaa bir ama caag kale. Noocaan noocan oo kale ah ayaa markii hore loo soo saaray si loo dhejiyo fiilooyinka dunta ah ee qaybaha qaabaysan iyo in lagu soo koobo isku xidhka siligga ee fiilooyinka korantada.
Waxaan u fidineynaa howshan wax-ka-beddelidda si aan u dhammaystirno waxyaabaha ay kuwa kale ee wax dhisa aysan awoodin ama aysan sameyn karin.
Waxay kuxirantahay cabirka qaybta, caaryada godad badan ayaa la soo saari karaa si loo kordhiyo wax soo saarka. Hawlgallada waxqabadka waxqabadka ee dugsiga sare ayaa mararka qaarkood loo baahan yahay si loo dhammaystiro shirkii.
Mindhicir gelinta waa habka wax lagu duubo ee caaryada loo isticmaalo in lagu duro cirbadda la galiyay ee la diyaariyay oo leh waxyaabo kala duwan, walxaha dhalaalayna waxaa lagu daraa gelinta si loo sameeyo shey isku dhafan. Qaybaha gundhigu badanaa waa qaybo bir ah, laakiin sidoo kale maro, warqad, silig, caag, galaas, alwaax, giraan silig, qaybo koronto.
Qaababka habka loo yaqaan "Insert molding" waa sida soo socota:
1. Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo isku-darka iyo kaabidda dhoobada qaab-fududaanta, foorarsiga, adkaanta birta, xoogga iyo iska caabbinta kuleylka, si loo sameeyo badeecadda isku-dhafan ee birta isku-dhafan ee wanaagsan.
2. Gaar ahaan, isku-darka dahaarka dhoobada iyo ku shaqeynta birta ayaa la isticmaalaa, badeecooyinka la sameeyayna waxay la kulmi karaan howlaha aasaasiga ah ee alaabta korantada.
3. Isku-darka sameynta hore ee waxyaabo badan oo la gelinayo ayaa ka dhigaya injineernimada boostada isku-dhafka unugyada wax soo saarka mid macquul ah.
4. Gelinta alaabtu kuma koobna bir, laakiin sidoo kale maro, warqad, silig, caag, galaas, alwaax, gariiradda, qaybaha korantada, iwm.
5. Alaabada adag ee wax lagu nadiifiyo iyo foorarka wax soo saarka laastikada laastikada ah ee ku duuban saxanka saldhiga caagga, hawlgalka qalafsan ee isku dubbaridka siddooyinku waa laga baaqsan karaa ka dib marka waxyaabaha isku dhafan la sameeyo iyada oo la marinayo cirbadeynta dusha hoose, taas oo ka dhigaysa isku dhafka otomaatigga ah habsocodyada ku xigaa way fudud yihiin.
6. Sababtoo ah waa iskudhafka alaabada la shubay iyo waxyaabaha birta la gelinayo, farqiga u dhexeeya fiilooyinka birta ah ayaa loo qaabeyn karaa si ka sii cidhiidhsan iyo kalsoonida qaabaynta ee wax soo saarka isku dhafan ayaa ka sarraysa tan saxaafadda ee wax ka samaynta ..
7. Xulo xalka cusboonaysiinta iyo xaaladaha ku habboon, taas oo ah, alaabada ay fududahay in la waxyeeleeyo (sida muraayadaha, gariiradda, qaybaha korantada, iwm.), Iyaguna waa lagu xidhi karaa oo lagu hagaajin karaa cusbada.
8. Iyada oo isku dhafan ee mashiinka wax taaj oo kale duray duritaanka iyo khalkhalgelinta, set oo dhan ee gelin iyo wixii la mid ah, inta badan mashaariicda wax taaj oo kale geliya ogaan kartaa wax soo saarka si toos ah.
9. ka dib marka la geliyo galka, waxa kale oo laga samayn karaa alaab leh godad godad leh ka dib daweynta ka saarida godka xudunta u ah.
Talooyin ku saabsan naqshadeynta qaybta iyo caaryada wax lagu dhejiyo
1. Shuruudaha loo baahan yahay waxyaabaha la gelinayo: adkaanta, barta dhalaalka, adkaanta, yaraanshaha
2. Haddii qaabka iyo cabbirka ay ku habboon tahay in la qaato, la dhigo, oo la meeleeyo. Naqshadaynta qaybaha waa inay ahaato mid ku habboon rakibaadda iyo hagaajinta caaryada si looga hortago in qaybaha ay ka leexdaan ama dabacsanaadaan saameynta cusbada qulqulaya.
4. Xullo qaab-dhismeedka ku habboon ee caaryada ah, iyo waxyaabaha la gelinayo sidoo kale waxaa gebi ahaanba lagu xiri karaa cusbada.
5. Yaraynta sameynta birta la geliyay way fududahay inaan sinnayn. Tijaabada xadka ee qaabka iyo saxnaanta cabirka qaybaha muhiimka ah waa in horey loo sii sameeyaa.
6. Inta lagu guda jiro hawsha cirbadeynta, gelinta biraha way fududahay in la rogrogo oo la beddelo, sidaa darteed halabuurka qaabeynta iyo qaabeynta qaabka caaryada ee u fududahay in la ilaaliyo gelinta biraha waa in si buuxda loo tixgeliyaa. Alaabooyinka qaabkooda wax lagu beddelayo aan la beddeli karin, tijaabada hore lagama maarmaan ay tahay.
7. Xaqiiji in qalabka birtu u baahan yihiin ka hor kululaynta ama daaweynta qalajinta. Ujeedada ayaa ah in la hubiyo tayada sheyga iyo sameynta xasilooni.
Wax taaj oo kale birta Birta wax taaj oo kale birta waa habka ugu ballaadhan loo isticmaalo wax taaj oo kale.
Wax taaj oo kale birta waa nooc ka mid ah habka lagu hagaajiyo gelinta biraha meel habboon oo ku jirta caaryada ka hor, ka dibna lagu duro caag ah wax taaj oo kale. Ka dib markii caaryada la furo, galka ayaa lagu duubay sheyga iyadoo la qaboojinayo oo la adkeynayo caag si loo helo badeecada iyada oo la gelinayo sida giraanta dunta leh iyo koronto.
Waxaa loo baahan yahay in qeybaha birta la geliyay ay lahaadaan qaab dhismeedka iyo dhumucda saxda ah, qeybaha ay ka kooban yihiin waxyaabaha la gelinayo ee caaryada ku jira si dhaqso leh oo kalsooni leh ayaa loo dejin karaa si looga hortago caagagga inay ku sii qulqulaan godadka hagaajinta. Waxyaabaha la gelinayo waxay sidoo kale u baahan yihiin in si gaar ah loo qaabeeyo, sida kala-goynta, jeexitaanka, maroojinta, iwm ee qaybaha gundhigga ah si loo hubiyo in lagu kalsoonaan karo isku-darka gudaha caagagga
Kartoo qaybo wax taaj oo kale biraha:
Mestech waa codsi khaas ah oo wax lagu qoro .. Fadlan nala soo xiriir si aan kaaga caawino inaad uhesho xalka saxda ah ee wax taaj oo kale ee arjigaaga ah.
Power fur wax taaj oo kale duray
Wax taaj oo kale ah oo lagu xardho naxaas
Sax saxanka biraha wax taaj oo kale
Birta wax taaj oo kale
Hore: Qurxinta Qurxinta-IML
Xiga: Nooca birta
3d Qalabka Daabac ee Daabacan
Wax taaj oo kale duritaanka dunta galinta
Gali Wax taaj oo kale oo Cirbad ah
Geliyaan wax taaj oo kale